Templelọ nke Debod - templelọ nsọ ndị Ijipt nke biliri na Madrid | Njem zuru oke
Lọ nke Debod
El Lọ nke Debod Ọ bụ ụlọ nsọ Ijipt nke anyị nwere nso karịa ka anyị chere. Ọ dị na Madrid, ebe ọ bụ na e zigara ya isi obodo Spain, mana ọ bụrụhaala na ọ na-edebe usoro ntụgharị nke ọ natalarị n'ọnọdụ ya. Ya mere enwere ike ikwu na ọ bụ onyinye.
Onyinye a mere na 1968, ebe ọ bụ na Spain nyeere aka chekwaa ụlọ arụ nubia. N’igosi ụdị ngosi ahụ, e nwere mba anọ bụ́ isi nyeere aka na ihe ncheta anọ ndị Ijipt nyere ha. Mana ọ bụ eziokwu na iwu ụlọ nsọ a bidoro ihe karịrị afọ 2000. Chọpụta ozi ha niile!
1 Akụkọ banyere ụlọ nsọ nke Debod
2 Uzo esi abia
3 Templelọ nsọ ahụ, akụkụ ya
4 Movega Spain
5 Ihe osise
6 Oge awa na ego
Akụkọ banyere ụlọ nsọ nke Debod
Ewubere ya malitere na narị afọ nke abụọ BC.Buru ụzọ ọ bụ Eze Adijalamani onye wuru a ụlọ ekpere ahụ e mere maka chi dị iche iche bụ́ Amun na Isis. Ma, ọ bụ eziokwu na nke nta nke nta, ọ bụ ndị eze ndị ọzọ bulikwara ọnụ ụlọ ụfọdụ, nke otu n’ime ndị eze Rome mechiri ya. Mana ihe ọ bụla nwere ịma mma ya, na-abịakwa oge mbibi irighiri ụzọ ya. Nke a ga - eme na narị afọ nke isii, mgbe emechiri ya ma hapụ ya. Ma n'agbanyeghị nke ahụ, mkpa ọ ka dị oke ndụ, ugbu a site na Madrid.
Uzo esi abia
E wuru ụlọukwu Debod na Madrid, na nso Plaza de España. More kpọmkwem, na Ogige Ugwu Ugwu. Mana ọbụlagodi maka ozi ndị ọzọ, adreesị ya bụ Calle Ferraz. Ruo ugbu a ị nwere ike iji ụgbọ oloko dị na Madrid-Príncipe Pío dịpụrụ adịpụ. Ọ bụ ezie na bọs: 1, 74, 25, 39, 138, C1, C2. Ọ bụrụ na ị gaa metro, Plaza de España L2, L3, L10 ma ọ bụ Ventura Rodríguez L3.
Templelọ nsọ ahụ, akụkụ ya
Ọ bụ eziokwu na akụkụ ụfọdụ nke akụkụ ya eweghachitela. Mana taa enwere ike idebe ndi isi ma nye ndi ozo ndu ohuru.
N'otu aka anyị nwere Adijalamani chapel, nke bu otu n’ime ihe ochie. Ejiri ihe oyiyi enyemaka chọọ ebe ị ga-ahụ eze na-enye chi onyinye. A na-ejikọta ihe nkiri niile a na-anọchi anya ya na òtù nzuzo ahụ.
N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ akụkụ ya ọzọ a na-akpọ Mammisi. Onye aha ya na-egosi ebe a mụrụ ya. Ebe ọ bụ na ekwere na chi nwanyị mụrụ nwa na ebe dịka nke a. N'ezie, nnyocha ndị ahụ na-egosi na ọ nwere ike inwe nzube ọzọ na-enweghị njedebe. Enweghị ihe odide na mgbidi ma enwere oghere, ebe a kwenyere na ọ ga-abụ na ọ nwere ihe oyiyi.
Ime ụlọ: Na mgbakwunye na akụkụ abụọ bụ isi, oge na-abịa mgbe anyị ga-ahụ ọtụtụ ụlọ. N’aka nke ozo, ebe obibi anyi n’eduba anyi naos anteroom. Nke a bụ obere ọnụ ụlọ na-agafe n'ime ụlọ naosi. Ọ na-egosi ụlọ ụka etiti na raara nye Isis. N'ebe ndịda corridor, ị ga-ahụ otu n'ime anwụ na-adọrọ adọrọ. Na Irilọ Osiriaca Ọ dị n'elu ma ọ bụ teres. Ichefughi nkpuru nkpuru, nke oghe nye ya.
Mgbe ụfọdụ ọ na-esiri anyị ike ikwere na ụlọ-nsọ ​​nke odibo na nke ọgbọ a nwere ike ịbịa n'ọnọdụ kacha mma. Mana nke ahụ bụ otu o siri dị. E bu ụzọ bibie ụlọ nsọ ahụ na mmalite afọ 60. E wetara ya na Elephantine Island, ebe ọ nọrọ afọ ole na ole. Mgbe ahụ, okwute ndị ahụ na-aga n'ụzọ Alexandria. Site ebe a, a na-etinye igbe ndị juru na ha nke nwere blọk kwuru na ụgbọ mmiri ruo mgbe ha ruru Valencia. Site na mgbe a ka a na-ebuga ha site na gwongworo na isi obodo. Ozugbo ha rutere, ụfọdụ atụfuola nọmba ha ma ọ na-esitụrụ anyị ike itinye ya ọzọ.
Anyị niile maara graffiti nke na-apụtakarị na ụfọdụ mgbidi na nke nwere ọtụtụ ụdị. N'ezie, n'okwu a, ha anọgidewo dị ka ihe osise na ụlọ nsọ nke Debod. Enwerela ihe karịrị 200 nwere ike ịhụ. Ma ọ bụghị ha niile na-esite n’otu mmadụ ma ọ bụ otu afọ. A na-ekwu na ọ dịla ọtụtụ ndị hapụrụ akara ha n'otu ebe dịka nke a. Site na ndị njem gaa na ụfọdụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi ma ọ bụ ụfọdụ ndị na-eme nchọpụta. Ha niile chọrọ ịkụ nzọ na ịhapụ ọka ha. Ọ bụrụ na ị na-eche ụdị graffiti ha hapụrụ, ọ ga-ekwukarịrị na ntakịrị ihe achọtala, site na ihe odide Greek ruo n'ụgbọ mmiri ma ọ bụ dromedaries.
Oge awa na ego
Ekwesịrị ikwu ya ọnụ ụzọ ụlọ nsọ ahụ na ogige ya ọ bụ kpam kpam free. Ọ bụ ezie na awa malite na Tuesday ruo Sọnde yana ezumike dị ka elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke ụtụtụ. Ma n’oge ọkọchị, site na June 10 ruo Septemba 00, ọ ga-emepe n’otu oge mana ọ ga-emechi n’elekere asaa nke ụtụtụ. Ma 20st na 00th nke Jenụwarị ga-emechi. Ọ ga-emechi ụzọ ya na Mee 15, yana December 15, 19 na 00.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Lọ nke Debod
Ihe ị ga-eme na Berlin